Egypta : 89 Isanjaton’ny Tanora No Manohana ny Sivana an’Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2017 4:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, فارسی, srpski, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 26 Novambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sivy amby valopolo isanjaton'ny tanora Egyptiana, ankizivavy na ankizilahy no milaza fa manohana ny sivana amin'ny aterineto izy ireo, araka ny fanadihadiana vao haingana. Mizara ireo tarehimarika ireo ny Bloggers Times izay nalaina tao amin'ny Vavahadin-tseraseran'ny Ivontoerana Egyptiana momba ny Fampahalalam-baovao sy ny Fanampiana amin'ny Fanapahan-kevitry ny Governemanta, sampan-draharaha ofisialin'ny Fanjakana Egyptiana
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Ivontoerana Egyptiana momba ny Fampahalalam-baovao sy ny Fanampiana amin'ny Fanapahan-kevitry ny Governemanta momba ny fampiasan'ny tanora ny aterineto any Egypta dia:
74% -n'ireo olona nanontaniana no mampiasa ny Aterineto mba hanarahana vaovao tsindraindray na matetika.
68% no mampiasa izany mba hakana hira, sarimihetsika, andian-tantara na lalao tsindraindray na matetika.
58% -n'ireo tanora Egyptiana no mampiasa ny solosaina ary 36% no manana ny solosainy manokana any an-trano.
52% -n'ireo mpampiasa solosaina no mahay mampiasa ny Aterineto.
98% -n'ireo nanontaniana no mihevitra fa ahafahana mijery vaovao betsaka ny Aterineto ary mifandray amin'ny tontolo izy ireo ankehitriny.
82% -n'ny mpisera aterineto no miahiahy momba ny fifandraisana azo avy amin'ny tambajotra.
72% no mihevitra fa misy fiantraikany ratsy eo amin'izy ireo ny Aterineto.
71% no mihevitra fa mampidi-doza ho an'ny ankizy ny aterineto.
43% no mihevitra fa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana ny aterineto.
89% no manohana ny hevitry ny lalàna mba hifehezana sy hanivanana ny votoatin'ny Aterineto.
58% no nandre momba ny bilaogy avy amin'ny fianakaviany na ny namany
37% no sambany nandre momba ny bilaogy tao anatin'ny enim-bolana farany.
Ny iray tamin'ireo olona nanontaniana telo no manana ny bilaoginy manokana.
50% no mampiasa ny Aterineto isan'andro ary latsaky ny 10 ora isan'andro ny ora laniany antserasera .
20% no mampiasa ny Aterineto isan-kerinandro ary 10 ka hatramin'ny 20 ora ny ora laniany antserasera .
Tanora Egyptiana 18 ka hatramin'ny 35 taona miisa 1.338 no nanaovana ny fanadihadiana. Tsara ihany koa ny manamarika fa niakatra ho 9.170.000 tamin'ny taona 2008 ny isan'ireo mpisera aterineto ao Egypta raha 650.000 izany tamin'ny 2000 .